Nzira yekutarisira gore ne Chef Automate uye AWS
Chef neAWS: Sangano rinokosha
Chef Chengetedza sezvinochengetedzwa zvinobatsira
Wedzera pakushamwaridzana kwako neAWS
Simba rebhizimusi Chef uye boka rakasununguka-tsime
AWS OpsWorks for Chef Automate inobatanidza kuenda-ku-market kushanda pakati peAma Amazon Web Services uye Boss software, Inc. Izvozvo zvinoreva, masangano ose anonyanya kufunga nezvekubudirira kwako nehutungamiri. Tinofara zvizere uye tave tichishanda nekushingaira kukupai kwamuri zvakanakisisa pane imwe neimwe yezvikamu zvedu inounza patafura. Icharamba ichishanda nesimba pamwe chete uye iwe unogona kuvimba nekucherechedza ichi chinopiwa chichiri kukura mukuona kwevangeri kutsoropodza. Mapiyona maviri emisika akashanda pamwe chete kuti ave nechokwadi chokuti wakagadzirira (sezvatakataura kubva pakutanga) "shandisa gore."
At musoro, tinoona chimiro nevatengi vedu vatengi. Sezvo isu tashandura ushamwari hwavo nekuvabatsira kubvisa kadhi yakakurumidza, yakachengeteka zvikuru, uye zvakanyanya kunyanya, Chef Automate inoshanduka kuva basa rekutungamira hukuru. Kungofanana nehupi hupi hutungamiri hutungamiri hwekutanga, hunovimbisa kuti hunoonekwa uye ruzivo rwekuvimbika hunoda simba rakawanda, kushingaira, uye zvinhu. Our Fortune 500 vatengi vanoda kudya basa-nheyo dzepamusoro uye zvidzidzo zvekushandisa sangano sekutarisa masimba.
AWS OpsWorks ye Chef Automate inopa imwechete yehubudiriro, kuchengeteka, uye unhu hunosimbisa hwe Chef Automate iyo iwe kazhinji wakatarisira kubva kune chero AWS kubatsirwa. Sezvo zvichipesana nechipiri-kufungidzira unhu husingaverengeki hwezvigadzirwa zvako pachako kana kuti zvinodiwa zvehutano hwako, unogona kupa AWS mukana wekutarisira Chef Automate nokuti iwe ne 24x7x365 chikamu uye kuripa-se-iwe-kuenda uchienzanisa. Rega AWS itarise nekufambisa kwako, kugadzirisa zvakare, nekugadzirisa kuraira. Izvozvo zvinokupa iwe neboka rako kupa mari shoma shoma kutarisira Chef Automate uye nguva yakawedzerwa kuisa mukurova vadzivisi vako.
AWS OpsMirayiridzo yeChef Automate inzvimbo yeAWS inobatsira. Kufanana nehupi hwehutungamiri hwaunotenga kubva kuAWS, ivo ndivo vatengesi vezvinyorwa. AWS inopa vhudzi, inobata nehutungamiri hwako, uye ndiyo chinangwa chako chekutsvaga kune rumwe rutivi rwekunetseka kwako. Chef Software Inc. ishamwari yeAWS uye tinosimbisa kushandiswa kwezvinhu zvedu. NeAWS OpsWorks for Chef Automate, uri kuwedzera pane ukama huripo iwe iye zvino una Amazon Web Services. Chero kushandiswa kwehutungamiri iyi kunoratidzika semashoko pamusoro peAWS yako yekupa. Iwe unowana simba rose re Chef, rakatsigirwa nemugove wegore iwe unonyatsoziva uye unovimba. Chikamu chikuru chekushandisa kwako Chef chinoshandiswa mune imwe yakananga, iri nyore kushandisa, uye iri nyore kuona nzvimbo. Kungofanana nedzimwe chikamu chekutanga chekushandisa kwako, chikamu chegadziriro yakasimba yakatakuriswa kwauri neAWS.
Ichi chipo chitsva inzira inoshandiswa yevatengi veAWS kuedza Chef yebhizimusi chinhu: Chef Automate. Nekukwira ku10 pasina hubs kwegore rimwe, ndiyo nzira yakachengeteka yakakwana yekutanga nokukurumidza uye kuona kuti sei Chef Automate inokupa kunzwisisa, kusagadzikana, uye chimiro chebasa chairo kana uchiita nezvose zvinoshandiswa pamusoro pezvirongwa zvako zvekushandira. NeAWS OpsWorks ye Chef Automate, iwe wakagadzirirawo kushandisa ruzhinji rwezvinyorwa zvinotanga kushandiswa nguva dzose zvinowanikwa mu Chef biological system kusanganisira Supermarket cookbooks, test-kitchen, InSpec, Habitat, uye (pachena) Chef yekubata nayo AWS hurongwa uye kushandiswa. Iwe unowana mukana wekutungamira zvakanakisisa zvezvinhu zvose zviri zviviri uye uchitanga nekunonoka kwekubata.
Hazvina kumbobvira zvichitsvaga kana zvishoma zvichitsvaga kutanga na Chef Automate; kufambidzana ikozvino muAWS imwechete nyaradzo seimwe humwe hurumende hurumende.
12 Tricks Kutarisira Multiple Cloud Services